Maitiro eBlockchain Technology Ari Kuchinja Sei Real Estate - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Chikuva chayo chinogonesa kujekesa musha kutengesa. Propy's blockchain zvigadzirwa inorekodha nhanho dzese dzekutengesa zvivakwa, kubva pakuratidza kufarira kusvika kusaina kondirakiti kuenda kuchimisa muridzi. Simba chairo re blockchain tekinoroji iri mukugadzirisa mashandisiro ezvekutengesa uchishandisa kugona kwayo kugadzira wega muridzi wezvivakwa zveimba kuburikidza nekushandisa zviratidzo zvinogona kutengeswa pane blockchain-based exchanges, iyo inovhura mikana yekudyara mumusika wezvivakwa. .
Iyo yakakosha tekinoroji ye blockchain inotora inokanganisa iyo real estate indasitiri munzira dzakawanda, ichipa vatengi nevatengesi nzira nyowani dzekubatanidza. Iko kune mikana ye blockchain mune akawanda maficha ekutengeserana edzimba dzimba kusanganisira kutsvaga kwemusoro, mari, kukweretesa, kutenga, kutengesa, kushingairira kwakakodzera, manejimendi kuyerera manejimendi uye manejimendi manejimendi. Blockchain tekinoroji inogona zvakare kushandiswa kubvisa vapindiri mune real estate transaction maitiro uye kudzikisa mutengo.
Blockchain real estate zvakare inofambisa kupatsanura, kupatsanurwa kwevaridzi "kuenzana muzvikamu zvinotengwa, zvinowanzozonzi chiratidzo kana demokrasi kune chinhu. Blockchain inobvumidza varidzi vezvivakwa avo vanoda mari yekutengesa imwe yeaseti yavo kuburikidza nechipo chechiratidzo uye kutengesa muzana yeiyo equity yavo kubhadhara iyo ichangowanikwa pfuma. Iwo madhijitari tokeni pane blockchain anomiririra muridzi wepfuma, uye muridzi anogona kutengesa iwo matokeni kuti adzivise kunetseka kwekutengesa imba uchishandisa nzira dzechinyakare.
Nekufananidzira chivakwa chiri mu blockchain, vagadziri vanogona kubvisa kudiwa kweyechinyakare kubhengi mari uye kuisunungura kubva kune echinyakare kutengesa mashedhi uye kurambidzwa kwekudyara mune iyo imba. Netiokisheni pane blockchain, vatengesi vevatengesi vanogona kutengesa chidimbu chepfuma. Panzvimbo pekutenga zvese kana chikamu chemidziyo, unogona kutenga tokeni ayo anotengeswa pane blockchain chinjana.
Kana tokeni yekutenga zvivakwa ikapihwa kuburikidza ne blockchain, zvinova nyore kutenga, kutengesa kana kutengesa pfuma yezvivakwa kuburikidza necha blockchain chikuva panogona kuitiswa zviitiko uye zvionekwe. Zviratidzo zvivakwa zvivakwa zvinogona kutengeswa pane kuchinjana uye zviitiko zvinogona kuitiswa nekukasira. Aya mabhizinesi anoderedza zvikwereti zvavo sezvo vasiri ivo vane chekuita nemidziyo.
Blockchain tekinoroji inobvumira vanhu vakati wandei kuti vatenge tokeni dzeimwe chivakwa uye vagovane varidzi. Semuenzaniso, kana 100-yuniti furati iri muridzi nevashambadzi makumi mashanu vakachengetedza pekugara nekutengesa zvivakwa kuburikidza ne blockchain, muzvinashawo wega anogona kuwana chiratidzo checha blockchain chinoratidza muridzi wepfuma. Kana chivakwa chikachinja maoko, chiratidzo chedhijitari chakanyorwa pane blockchain, ichigadzira nhoroondo yakajeka yevaridzi venyika.
Kugadziriswa kwekutepfenyura tekinoroji yakagadzirirwa kuunza chivimbo uye chokwadi kune zvigadzirwa zvemadhijitari zvinogona kushandiswa kugadzira mhinduro dzinoshanda dzekutengesa nedzimba dzekugara, kubva pakutora zvivakwa kusvika pakushingairira kwakaringana uye kudyara kwevanhu vazhinji. Atlant yakagadzira, semuenzaniso, chikuva chinoshandisa blockchain tekinoroji kufambisa zvivakwa zvechitoro. Imwe dhijitari blockchain-yakavakirwa mhinduro yakagadziriswa neSweden Land Authority Lantmateriet mukubatana ne blockchain yekutanga Chromaway, Sweden telecommunications hofori Telia Company uye vanoverengeka real estate vavaki.
Blockchain-based real estate iri kuwana mukurumbira senzira yevatengi, vatengesi nevashambadziri kuti vapindirane uye vadzidze zvakawanda nezve real estate. Nekuunzwa kwezvibvumirano zvakangwara, mapuratifomu e blockchain ari kuvagonesa kuisa mucherechedzo pfuma senge zvivakwa uye kutengeserana mukati cryptocurrencies dzakadai seBitcoin uye ether. Nepo mafomu ekutanga achine makore gumi kure, blockchain yakura kupfuura imwechete yekushandisa kesi yekukosha kukosha uye iko zvino inogona kushandiswa kuongorora, kuchengetedza uye kugadzirisa chikamu chakakura chekutengesa zvivakwa.
Blockchain yakajairika, isingagadzirisike rejista iyo inoita kuti zvive nyore kurekodha kutengeserana uye kuteedzera zvinhu pane yemubatanidzwa network. Iri bhuku rakachengetedzeka-rakachengetedzwa, rine ruzivo-runogonesa vese vanoita basa rekutora kuti vaone nekuongorora mashandisirwo acho, nokudaro vachideredza njodzi, mutengo uye njodzi kune ese marudzi ekutengeserana. Iyo zvakare inomhanyisa kondirakiti maitiro, inochengetedza nguva uye inoderedza mutengo.
Kunyangwe iyo tekinoroji ichigona kunetsa kunzwisisa, iyo yakakosha pfungwa kuseri kwe blockchain iri nyore: inopa yakazvimiririra, inosimbiswa uye yakavimbika rekodhi yezviitiko nekutengeserana. Fungidzira, muzvivakwa, rekodhi rechokwadi revaridzi data risingango gonesa mapato kuita chibvumirano kuti vazivane, asiwo kuvimba kuti mutengesi anogona kunyatsoziva muridzi wechokwadi wepfuma uye kuti mumwe munhu asiri kuda muridzi. yemidziyo. Nhoroondo yakajeka uye isingarambike yezvakakosha yakakosha, uye izvi zvinongogoneka nekuda kwetekinoroji inoshandiswa mu blockchain iyo inogona kubatsira kuita kuti basa riwedzere uye riite kupfuura zviri kuitika nhasi.
Cryptocurrencies inoshandisa blockchain kugona kuita sedhairekitori kune yakakura komputa network, iine kugona kuteedzera zviitiko uye zvinyorwa zvinogona kushandiswa kuyambuka makambani, kwete zvishoma zvivakwa. Nepo cryptocurrencies iri kutorwa neyakagadzwa indasitiri yezvivakwa, makambani ari kushandisa blockchain tekinoroji kutora kudzoka uye zvimwe zvinoenderana zviitiko. Blockchain zvakare inosvitsa nzira nyowani dzekutengesa zvivakwa uye inogonesa yekutengesa mapuratifomu uye pamusika misika yekutsigira real estate kutengeserana.
Mapuratifomu akaita saNatmin, semuenzaniso, anotarisa pakushandisa blockchain kufambisa fiduciary transaction uye kuderedza nguva dzekuvhara uye mutengo. Nekudaro, zvivakwa zvinoshandisa blockchain zvinogona zvakare kugadzirisa mashandiro anokurumidza uye akachengeteka uye asingade anodhura echitatu-bato matrust. Kunyangwe blockchain iine mukana wekuvhiringidza zvivakwa - ingave iri $ 18 miriyoni dhizaina muAspen kana zvibvumirano zvine hungwaru zvinoita kuti kutenga imba kuve nyore sekutenga mushonga wemazino - vashandi vepamba zvivakwa vacharamba vachibudirira.
Sezvo avhareji mota inosvika izere-saizi yekubatana, yemagetsi uye yekuzvidzivirira yekufambisa, kudiwa kwe ...
Cryptocurrencies yakadai seBitcoin inoshandisa blockchains kunyora kutengeserana navo. Network yemakomputa (inozivikanwa se ...
Mufananidzo sosi - https://www.pexels.com/ru-ru/photo/730547/ Cryptocurrencies ...